လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ပြန်လည်ပေါင်းသင်းခြင်း - လိင်အကြောင်း။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ပြန်လည် reboot လုပ်သည့်အခါပြissueနာကြီးတစ်ခုမှာ -ဘယ်လိုလိင်ငါ၏အပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်?" ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့မေးမြန်းခံရသည့်အခက်ခဲဆုံးမေးခွန်းဖြစ်သည်။ ငါတို့မှာအဖြေမရှိပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်တစ်ခုချင်းစီ၊ သင်မည်မျှအကွာအဝေးနှင့်သင် ED ရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်နဲ့အော်ဂဇင်ကသင့်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်နိုင်တယ်၊
ဒီကို restart အကောင့်ကိုကြည့်ပါ: အသက် ၂၁ - ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်နှေးကွေးသွားနိုင်သည် (ED)။ နောက်ထပ်လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံ:
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုသည်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ နှစ်ပေါင်းနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအင်တာနက်အမြန်နှုန်းမြင့်မားသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဆက်၊ လူမျိုးဆက်သစ်ဖြစ်သောကြောင့်လူအများကဤအရာနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများမလုပ်မချင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည်မှာလုံးဝရှင်းလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။ ဒီမျိုးဆက်ဟောင်းမျိုးဆက်) ဒီဟာကတကယ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရဖို့ပထမမျိုးဆက်ပါ။ အဘယ်သူမျှမကယ့်ကိုကလာမယ့်မြင်ကြပြီနိုင်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းနဲ့ငါဆင်တူတဲ့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ရင် PMO မပါဘဲရက်အတော်ကြာသွားတဲ့အခါမှာလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုတွေလျော့နည်းသွားပြီး၊ သင်ချက်ချင်းသိသွားတဲ့အချိန်မှာ၊ လူများနှင့်သင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမှာသင်ဟာမချင့်မရဲ၊ ယုံကြည်မှု နည်း၍ ပို၍ ကွင်းဆက်စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ငါ nofap စကတည်းကငါ့ဘဝကပိုကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ ၁၃ ရက်လောက်နေခဲ့ဖူးတဲ့ငါ့ရဲ့ပြေးလမ်းတစ်ခုမှာငါနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကငါ့ကိုအလုပ်စလုပ်တယ်။ အခုသူနဲ့အတူလအနည်းငယ်နေခဲ့ဖူးတယ် ရည်းစားတစ်ယောက်နဲ့ပြန်ဖွင့်တာဟာတကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိခြင်းကြောင့်မိန်းကလေးများနှင့်စတင်စတင်ပေါင်းသင်းပါကသင်မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်ကိုကောင်းစွာသတိပြုပါ။ အကယ်၍ သင်သည်မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံလျှင်သင်၏ ဦး နှောက်သည်ထို dopamine မြင့်မားသောစိတ်ကိုစပြီးစတင်လိုလာပြီးသင်ထပ်မံ fap လိုအပ်သည်ဟုခံစားလာရလိမ့်မည်။
အနည်းဆုံးတော့ဒါဟာငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပါ။ ငါ3နှစ်အရွယ်ကတည်းကငါသွားခဲ့ကြောင်းသောစဉ်ဆက်မပြတ်နေ့စဉ် fapping အုပ်ချုပ်မှုစနစ်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်ပြီးနောက်ငါနှင့်ငါ့ရည်းစား, ငါနေ့တိုင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာကဲ့သို့တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလိင်ဆက်ဆံစတင် ကောင်းပြီ၊ စစ်မှန်သောရည်းစားနှင့်လိင်ပြောင်းခြင်းသည်လူမှုရေးကိုအနည်းငယ်သာအထောက်အကူပြုသော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝခက်ခဲသောအခြေအနေများအတွက်များစွာအထောက်အကူမပြုနိုင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းသူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်လိင်နှင့်မသက်ဆိုင်သောကျန်းမာရေးကိုစတင်စဉ်းစားလာသည်။ ငါသူမကိုကျွန်မတို့အားလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရိုက်ကူးရန်ဖိအားပေးခဲ့သည်၊
ဒါကြောင့်ငါဒါကိုဝေမျှရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကမင်းတို့ဟာ Streak နဲ့ဆက်ပြီးအားစိုက်နေမယ်ဆိုရင်သင်ဟာလိင်ဆက်ဆံမှုကိုအဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်လို့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဟာအချိန်တိုင်း fapping မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့ကို sexy ယောက်ျားတွေဟာမတွန်းလှန်နိုင်လောက်အောင်ပဲ။ p, PMO မှလိင်သို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးကြောင်းကြိုတင်သတိထားပါ။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအရ၊ ငါသတိထားမိခဲ့သည်မှာသင်စဉ်းစားမိလျှင်၊ သင်သည်လိင်ဆက်ဆံမှုများစွာရှိပါကအချို့သောလက္ခဏာများမှာကျန်ရှိနေပြီးအချို့မှာလျော့နည်းသွားပြီးအချို့မှာလုံးဝမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ငါအတွက်, ငါမနေ့ကသုံးကြိမ်ကဲ့သို့ငါ့ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်ငါတစ်ခါတစ်ရံတွင်လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်အဆင်မပြေခံစားရတယ်။
ဒါပေမယ့်ငါပုပ်နေတုန်းမှာမလွယ်ကူခဲ့ဘူး၊ လူတွေမျက်စိထဲကလူတွေကိုမြင်နိုင်တယ်၊ စကားလုံးတွေပြုံးပြီးပြောနေကျစကားလုံးတစ်လုံးလုံးကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးသလိုခံစားရတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနည်းပါးသည် (လျင်မြန်စွာနှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်းစသည်) သို့သော်အပျက်သဘောဆောင်သောစကားပြောဆိုမှုများရှိနေသေးသည်။ သင်သည် ၇ ရက်ကြာလုံးလုံးအခွံမာသီးမရှိဘဲသွားသကဲ့သို့သင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ဒီအထောကျအကူအချက်အလက်ဖြစ်ခဲ့သည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/7sxcf/nofap_is_the_real_deal_long_post_social_anxiety/cie28l
သငျသညျ porn-သွေးဆောင် ED ရှိပါကသင့်ဦးနှောက်ကခဏအတွက်လုံလောက်သော orgasm ရှိခဲ့ပါတယ်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ် (ဦးနှောက်) ကိုနားထောင်ပါ။ သငျသညျ ED ရှိပါကစိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများနဲ့စိုက်ထူအတင်းရန်ကြိုးစားနေသည်သင်၏ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ counterproductive ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, ကို restart ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းနှုန်းပြဇယား။
အဓိကအချက် - အော်ဂဇင်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်စိုက်ထူခြင်းကိုအတင်းအကျပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။ သို့သော်နမ်းခြင်း၊ ထိခြင်းနှင့်အရူးလုပ်ခြင်းတို့သည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပါ၊ ဖန်သားပြင်များမှတဆင့်အတုလှုံ့ဆော်မှုသည်လူကိုထိတွေ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲသင်၏စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ် ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်၏နဗ်ကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောလမ်းကြောင်းအားနည်းစေရုံသာမကသင်၏“ အစစ်အမှန်အရာ” လမ်းကြောင်းများကိုအားဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ reboot လုပ်နေစဉ်အတွင်းအချို့သောယောက်ျားများသည်ကောင်းသောအောင်မြင်မှုရရှိသည် ရှေးခေတ် technique ကို ကြောင်းထှတျအထိပျအဘို့အသွားခြင်းမရှိဘဲမကြာခဏရငျးနှီးပါရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ မိမိအ reboot စဉ်အတွင်းန်းကျင်အရူးလုပ်သူကို (ကကောင်လေး - အသက် ၃၀ - အက်ဒ်နှင့်ရည်းစား: ၅၂ ရက်တိုင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့ပန်းတိုင်များရောက်ရှိခဲ့သည်။
porn-သွေးဆောင် ED မှပြန်လည်ထူထောင်တစ်ဦးကခင်ပွန်း said:
ပြန်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အစောပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုအနည်းငယ်လျော့နည်းစေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏တစ်ချိန်ချိန် (လူတိုင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၊ သေချာသည်) သင်၏အဖော်နှင့်အတူ (အော်ဂဇင်မပါဘဲနှင့်မပါ ၀ င်ပါ) စိတ်အေးအေးထားခြင်း၊ ဖိအားမရှိလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ကုထုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်ဟုခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့လိင်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောကျန်းမာရေး၊ ပုံမှန်နှင့်သဘာဝကျေနပ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ကူညီနေပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဇနီးကိုနွေးနွေးထွေးထွေးကိုင်တွယ်ရုံဖြင့်ခေါင်းကိုနောက်ကျောတွင်သံသယများတိုးများလာခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်၏တုန့်ပြန်မှုသည် ပို၍ စွဲမှတ်စရာကောင်းခြင်းအားဖြင့်စိုက်ထူမှုရရှိရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အကြိမ်များစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။
ယောက်ျားများသည် ED ကိုညစ်ညမ်းသောအကျင့်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းပထမဆုံးအကြိမ်လေ့လာသောအခါ၎င်းတို့သည် porn, masturbation နှင့် orgasm အားလုံးကိုရပ်တန့်ရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ အချို့သည်အောင်မြင်သော်လည်းအချို့သည်ပြန်လည်နာလန်ထူသို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်တွဲဖက်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြန်ဖွင့်ခြင်းမပြုမီစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာ“ က” တွင်ကန်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု"နောက်ရက်စုံတွဲတစ်တွဲကျော်။ ဤအချက်ကိုသိရှိထားခြင်းကသင့်အားအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်ပြီးနောက်“ ဘယ်နေရာမှာ” မှပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းမှုများကြောင့်သင့်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသက်သာစေနိုင်သည်။
ဒီမှာအသက် ၅၀ နောက်ခင်ပွန်းတစ် ဦး ရှိတယ်။
ငါသာအစဉ်အဆက်တို့ကြောင့် PMO-Ed မှ NoFap စိတ်ဝင်စားဖြစ်လာခဲ့သည်; မရကငျြ့ဝတျသို့မဟုတ်ဘာသာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်။ ငါ၏အတုံ့ပြန်မှုကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာကျွန်မရဲ့ပန်းတိုင်မပိုတသမတ်တည်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အော်ဂဇင်ငါ့ SO ထိုးဖောက်နိုင်စေဖို့ထက်မြတ်သောဖြစ်ကြသည်ကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစယူကျေးဇူးပြုပြီး:
၅ လနီးပါးကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုစနစ်ပျက်ပြားသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးလေ့လာသိရှိခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် dopamine အလွန်အစွမ်းထက်သောအရာများမှအဝေးမှပင်လိင်မှုကိစ္စမှရရှိသော…အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှရရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ (ဟုတ်တယ်၊ အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်၊ ငါသိတယ်)
ကျွန်ုပ်သည် ၂၅ နှစ်လွန် LTR လည်းပါဝင်သည်။
သူမနှင့်ပတ်သက်သောအတွေးများအပါအ ၀ င်မည်သည့်အရာကိုမဆိုရိုက်နှက်ခြင်း - တုန့်ပြန်မှုအလွန်ပြင်းထန်သောအရေပြားသည်ကွဲသွားခြင်း၊ ခုတ်ဖြတ်ခြင်း ၁၂-၁၅၊ ရင်ဘတ်ပေါ်ရှုပ်ထွေးခြင်း။
သူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံပါ။ နောက်ဆုံး ... ၇ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းကိုရရှိခဲ့ပါကအထူးသဖြင့်ထိုဆန္ဒပြည့်ဝမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လက်မှဖြစ်လျှင် ... သို့သော်တစ်ပတ်အတွင်းလိင်ဆန္ဒပြည့်မှုကိုမရှာနိုင်ခဲ့လျှင် အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လက်ဖြင့်အများဆုံး ... ထို့နောက် ... သူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်၊ ခက်သည်၊ သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကဲ့သို့ပေါက်ကွဲခြင်းမဟုတ်သော်လည်းအလွန်ဖြစ်နိုင်ပြီးပျော်စရာကောင်းသည်။
porn.com ဆိုဒ်များမှတစ်ဆင့်စူပါလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်ဤတစ်ခုတည်းသောနေရာကိုငါသာရောက်ခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စမှာတော့ညစ်ညမ်းရုပ် ၀ တ်ရုံမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်မရဲ့ 'ဆံပင်' တွေကိုရိုက်နှက်ဖို့သင်ယူခဲ့တယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကကျွန်ုပ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကို cum လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမလုပ်ဆောင်လျှင်သူမသည်မလုပ်နိုင်ပါ။
ဒါကြောင့်ဒီအရာကကျွန်တော့် reboot ကအမြဲတမ်းကြာနေပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအဲဒီလိုအရေပြားကိုဆန့်တဲ့ ၁၅ ခေါက် - ဒုံးကျည် - အော်ဂဇင်တွေလိုချင်တယ်။ (ပြီးတော့ငါတကယ်ထိုင်ပြီးငါ့ဘဝကိုအကဲဖြတ်တဲ့အခါငါရေချိုးခန်းထဲမှာဝှက်ထားတာထက်သူမနဲ့လိင်အကြောင်းမျှဝေမယ်ဆိုတာနားလည်တယ်။ )
ဒီတော့ငါ့အဘို့, ငါ reboot စဉ်အတွင်းလိင်ကောင်းတစ် ဦး အရာဖြစ်၏။ ကျွန်တော်လုံးဝမနာပါဘူး (ငါထင်ခဲ့တယ်၊ ငါဒီမှာပြသခဲ့သည်။ ) ဒါပေမယ့်ငါမသိခဲ့ဘူး၊ ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုရှုပ်ထွေးစေခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောလိင်ဆန္ဒပြည့်ဝမှုရင်းမြစ်သည်သူမနှင့်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နေသရွေ့ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည် (ကျွန်ုပ်အတွက်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်တည်းသော) ကိုင်တွယ်နိုင်သည့်အချိန်ဇယားတစ်ခုအရသူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်မနာကျင်စေပါ။ သို့သော်အခြားမည်သည့်ပုံစံမဆို လိင်အပျော်အပါး (ဘာမျှမဖြစ်စေသောအမြန်ပွတ်တိုက်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းပင်) သည်နာကျင်စေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်ဟန်ချက်ညီပြန်, ဒါပေမယ့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူအများကြီးကြုံတွေ့မဟုတ်ပါလျှင်, တစ် ဦး မိတ်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံသင်သည်သင်၏ကြောင်းပြသပါလိမ့်မယ် များမှာတကယ်တော့နောက်ကျောပုံမှန်။ ဥပမာအားဖြင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ပြောတာက
"အလိုအလျောက်စိုက်ထူနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကတကယ့်နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်မသေချာဘူး။ အရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့မည်ဟုခံစားရရန်အပိုဆုကြေးတစ်ခုနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်ရည်းစားကိုရက်အနည်းငယ်မျှမတွေ့ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာငါအလိုအလျောက်စိုက်ထူတာမရှိဘူး။ ငါ့ရဲ့အရင်ပြtroublနာတွေကြောင့်ငါစိတ်ပူမိတယ်၊ ငါထပ်ပြီးဆုံးရှုံးနေတာလား။ ဒါပေမယ့်သူမကိုတွေ့တော့အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ သူမ၏ထိတွေ့မှုနှင့်အနံ့သည်ကျွန်ုပ်ကိုလုံးဝလှည့်စေပြီးလိင်တံတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သင့် ဦး နှောက်ဟာမျှတမှုမရှိရင်တောင်မှအလိုအလျောက်စိုက်ထုတ်မှုမျိုးမရှိရင်တောင်မှအရာအားလုံးကထွက်ပေါ်လာမှာပါ။ ”
“ ငါတကယ်မနှစ်သက်တဲ့ဒီ rebooting လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတစ်နေ့မှာသင်ဟာအသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်၊ နောက်တစ်နေ့မှာစိတ်အားထက်သန်မှု ၈၀ သက်တမ်းနဲ့တူတယ်လို့ခံစားရနိုင်တယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ထိုအရာကိုဖြတ်သန်းခြင်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သင်နှစ် ဦး စလုံးသည် reboot healing process သည်အလုပ်လုပ်သည်ဟုယုံကြည်မှုများစွာလိုအပ်သည်။ သူမသည်ကြီးပြီးလိင်ဆက်ဆံမှုသည်နောက်ဆုံး၌ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ဒါကအခုလား၊ တစ်လအတွင်းကျွန်တော်ပြန်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြaနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကကြားရတာနှစ်သိမ့်စရာကောင်းပြီးဖိအားကိုလုံး ၀ ဖယ်ရှားပေးတယ်။
ငါသည်လည်းအိမ်ထောင်ဖက် / ဇနီးနှင့်ပြန်ဖွင့်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်ထင်သော်လည်းသင်သူမ၏ပါဝင်ပတ်သက်ရန်ရှိသည်။ မင်းရဲ့ပြproblemနာကဘာလဲ၊ ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသူ့ကိုမင်းပြောပြရမယ်။
ကျွန်တော့်ဇနီးကို YBOP ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ ကံကောင်းတာကသူကအရာရာကိုနားလည်ပြီးဒေါသလည်းမထွက်ဘူး။
ဤတွင်လိမ္မာပါးနပ်သောအကြံဥာဏ်တစ်ခုမှာ - The One-Way Street Method
ဒီအကောင်လေးကိုသူ့ရည်းစားနှင့်အတူပြန်လည် reboot လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသူမကိုနှိုးဆှနိုငျကွောငျးသော်လည်း, သူသည်မိမိအ reboot ပွညျ့စုံ၏ဆုံးဖြတ်သည်သည်အထိသူ့လိင်တံမထိစေနိုင်သည်။ သူမသည်အကြောင်းတော်တော်အသိစိတ်, ဒါပေမယ့်လုံးဝကိုက်ညီမပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကြာသပတေးနေ့ည (၅၂) တွင်ပထမဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ရာခေလ၏အိမ်၌တည်းနေခဲ့သည်။ အတူတူအစာစားချိန်မှာထုံးစံအတိုင်းချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပြီးတဲ့နောက်တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ရုပ်ရှင်ပြီးနောက်အိပ်ရာထံသို့သွားလေ၏။ သူမကြောင်ကိုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးသွားတွေကိုစုတ်ဖြဲနေပြီးအိပ်ရာအတွက်အဆင်သင့်ပြင်နေတုန်းအဖုံးတွေအောက်မှာလဲလျောင်းနေတုန်းကျွန်တော်ပထမဆုံးသွားခဲ့တယ်။ သူမသည်ရေချိုးခန်း၌တက်လက်စသတ်ပြီးတော့အိပ်ခန်းသို့ရောက်ကြ၏။ သူမ ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အချိန်တွင်ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူမသည်သူ၏အတွင်းခံအဝတ်အစားများအထိရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူမကကျွန်ုပ်အပေါ်သို့ခုန်ချလိုက်သည်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ရှာဖွေနေကိုက်ညီမှု set ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ထိပ်ဆုံးသို့တက်သွားပြီးကြွန်မတို့သည်နမ်းရှုပ်နေသည့်ကြွန်တော့်တို့သည်နမ်းရှုပ်နေခြင်း၊ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆက်ဆံခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သူမအိပ်ရာပေါ်သို့တက်ပြီးအမှုအရာအနည်းငယ်ထပ်မံသွားခဲ့သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမငါ့ကိုထိပ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပထမ ဦး ဆုံး ၁၀ မိနစ်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နီးကပ်စွာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအရမ်းကိုခဲယဉ်းခဲ့တယ်။ သူမအိပ်ရာဝင်တဲ့အခါငါအရမ်းခက်လာပြီးသူမကိုနှစ်သက်လာသည်နှင့်တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်သွားသည်။ ထိုအခါငါသူမ၏အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်သူမ၏ကောင်းသောခံစားရအောင်ခဲ့သည်။ သူကတစ်ဖက်သတ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်သူမငါ့ကိုမထိတွေ့နိုင်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူမငါ့ကိုနောက်ဆုံးထိခဲ့သည့်နေ့ 10 ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်တည့်မတ်သော်လည်းငါ့ဆီသို့ရောက်သည်၊ အဲ့တာကကောင်းပေမယ့်နောက် ၂၁ ရက်အတွက်တော့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းကန့်သတ်ချက်မရှိတော့ဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မမှာ MO မရှိဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစမ်းသပ်ခဲ့ဘူး၊ reboot လုပ်နေတုန်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုသိပ်မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကဒါကိုအလေးအနက်ထားပြီးကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တာလို့ထင်တယ်။ ငါရာခေလအပါအဝင်အရာခပ်သိမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှောင်ကြဉ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အတူတူအဝတ်အချည်းစည်းရှိနေသေးပေမယ့်သူမကငါ့ကိုနှိုးဆွဖို့ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုမထိဖို့ဘာမှလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သောကြောင့်, ငါနောက်ဆုံး 54 ရက်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်ခန်းလှုပ်ရှားမှုများအများစုတစ်လျှောက်လုံး flaccid ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကြာသပတေးနေ့ညမှာသူမငါ့ကိုနှိုးဆွဖို့တစ်ခုခုလုပ်သည့်အခါငါအလွယ်တကူငါအလွယ်တကူတစေ့တစောင်းရတယ်။
ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုလက်ဖြင့်မကိုင်ဘဲဝန်ခံခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၀ မိနစ်ကြာမြဲမြံစွာရပ်တည်နေသည်မှာသေချာသည်၊ နမ်းခြင်း၊ လေးလံသော၊ တိုက်ရိုက်၊ လက်ကိုင်လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ညစ်ပတ်သောစကားပြောဆိုခြင်း၊ ရာခေလ၏မြည်းကိုကြည့်စရာမလိုခြင်း၊ ငါ့ ဦး နှောက်ညှိနှိုင်းလိုက်တာနဲ့ BAM လိုပဲငါဖွင့်လိုက်တယ်။ ဒါဟာသေချာပေါက်အနာဂတ်အတွက်ကောင်းစွာနိမိတ်လက္ခဏာ
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုလုပ်နေစဉ်ညစ်ညမ်းမှုအားနည်းနေစေသည့်ပြန်လည်ထူထောင်နေသောယောက်ျားလေးမှပြန်လည်စတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှလူတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောသောစကားဖြစ်သည်။
“ ဒီနေရာကနေထွက်ဖို့ခဲယဉ်းတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့လုံးဝဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောလများအတွင်းကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းသည်ထိုညစ်ညမ်းမှုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြစ်ရသည်မှာကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင်ဖြစ်သည်။ ငါအံ့သြဖွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ခြွင်းချက်မရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းကြောင့်ငါအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုနှင့်တော်တော်လေးလွယ်ကူစွာကနေအဆက်မပြတ်ပယ်လူရှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းအရှုံးမပေးနိုင်ခဲ့သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်, ငြင်းပယ်ခံရ, အရှုံး: အဆိုပါသည်အနာပျောက်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသာတကယ်ရှိနေဆဲဟုကိုကွောကျရှံ့ခွငျးအားဖွငျ့မရရှိသေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားယခုနောက်ခံသို့နွမ်းနေကြသည်, ငါအများကြီးကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခံစားနေပါတယ်။
ငါ့ဘဝရဲ့အကြွင်းမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့အတူငါပြန်လည်ထူထောင်ရေးချိန်သီးသည်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့တွင် (libido ပညာရှင်) ခံစားမှုပိုကောင်းလာသည်နှင့်အမျှနောက်တစ်နေ့ပိုဆိုးလာသည်မှာအလွန်ခက်ခဲသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ငါငယ်ငယ်တုန်းကလိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲဒီဘာသာတရားကအရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့နေ့တွေရှိတယ် နီးပါး အကောင်းတစ်စိတ်ကူးသလိုပဲ။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုစိတ်ပျက်စရာများနှင့်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဒီတစ်ခုတည်းကိုဖြတ်သန်းခြင်းဟာပိုကောင်းတယ်၊ ပိုဆိုးတယ်လို့ထင်တယ်။ ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကိုငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးထဲရောက်အောင်တောင်ငါရှက်တယ်။ ထိုအရှက်ကွဲခြင်းကကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ ငါ့စေ့စပ်ထားတာမရှိရင်ငါဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြာကြီးအကြောက်တရားရှိလိမ့်မယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်၏စေ့စပ်ထားခြင်းမရှိလျှင်ဤအနာပျောက်စေသောလမ်းကြောင်းသို့ကျွန်ုပ်ပို့ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါသည်လည်းမည်သူမျှငါ့မျက်လုံးများကိုအော်ဟစ်။ ငါ့အသွင်ပြောင်းမှုကိုထောက်ခံရန်ထိုတွင်ရှိသူတစ် ဦး ဦး ရှိနေစဉ်ကျွန်ုပ်၏ကြောက်စိတ်များနှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်မရှိခဲ့ပါ။ ငါဒီဟာကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူရှိနေသောကြောင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကံကောင်း။ ပျော်ရွှင်မိသည်။
သူမသည်သူမအတွက်အလွန်ခက်ခဲခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့စပ်ကြားသံသယများနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ငါကိုယ်တိုင်လေ့လာနေတာအားလုံးအတွက်သူမကသူမကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာသင်ယူနေသည်။ တနင်္ဂနွေပျော်ပွဲစားပွဲမဟုတ်ဘူး။
ငါဒီဖြစ်စဉ်ကိုခံနေရတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူတစ်ယောက်ကိုငါ့ဘဝထဲကိုဖိတ်တာကိုငါမမြင်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်စေ့စပ်ထားသူကငါ့ကိုကုသခြင်းအတွက်အဓိကထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုတကယ်ညွှန်ပြခဲ့တယ်။ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒနှင့်တိုက်နယ်ပြောင်းလဲမှုများကိုကျွန်ုပ်ခံယူနေစဉ်သူမသည်ကျွန်ုပ်ဘဝသို့ရောက်လာပြီး၊ “ သိသည်” မဟုတ်ပါကချစ်သူအသစ်ကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲလွန်းသည်။
သင်၏ဘ ၀ ၌တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေ၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ reboot လုပ်ခြင်းသည်သာယာလှပသောရလဒ်များကိုသာရရှိစေနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ မင်းကမှန်ကန်တဲ့ခြေလှမ်းကိုလှမ်းလိုက်ပြီ။ မင်းရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ရှုထောင့်အဖြစ်သို့ရောက်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ခါးပတ်နီးကပ်နေသည်။
သင်၏ boot camp နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပြီးပြည့်စုံသည်။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာငါတို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလိုပါပဲ၊ p / m / o စွဲလမ်းသူများအနေနှင့်လုပ်ချင်ကြသော်လည်းမည်သည့်အခါမျှဘောလုံးမရှိခဲ့ပါ။
“ D ရဲ့ကုသမှုလုပ်ငန်းဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့စွန့်စားမှုတစ်ခုပါ။ ငါဟာငါတို့ရဲ့ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတကယ်ပဲပြောသင့်တယ်၊ မည်သည့်အမျိုးသမီးကမဆိုသံသယရှိနိုင်သည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်အမျိုးသား၏လုံခြုံရေးနှင့်အမျိုးသမီး၏လုံခြုံရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည့်နေရာ၌မျက်စိကန်းသောအစက်အပြောက်အချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒီစိုးရိမ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခြင်းဟာသူတို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီဟာကိုဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ရည်မှန်းချက်ဆက်လက်ရှိနေရန်၊ အရာရာကိုကိုယ်တိုင်မယူရန်၊ အကြောက်လွန်ရောဂါဝေဒနာမဖြစ်ရန်နှင့်သိသိသာသာအသက်အရွယ်ကြီးရင့်သောခွဲထုတ်ခြင်းယန္တရားတွင်မပါ ၀ င်ရန်ခက်ခဲသည်။ (သင်သိသည်။ ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်)
သို့သော်ဆိုပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးကာလအတွင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်မေတ္တာရှင်နှစ်ထပ်ကွမ်းအရေးကြီးပါသည်။ သင်တစ်ဦးအပူအငြင်းအခုံအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေပါလျှင်အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်သည်ထိုအခိုက်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုစေခြင်းငှါဘယ်လောက်, ကသငျသညျအသီးအသီးတက်ငရဲကိုပိတျထားကြောင်းလုံးဝအလွန်အရေးကြီးသည်နှင့်သင်တစ်ဦးအေးဆေးအတွက်ထပ်မံစကားပြောဆိုရှေ့ဆက်မသွားခင် snuggles ၏ 150 CCS လက်ခံရရှိ , ဆင်ခြင်တုံတရား, မေတ္တာရှင်များနှင့်လေးစားမှုထုံးစံ။
ငါသည်လည်းအခန်းနှစ်ခန်းသို့ခဏတာကွဲသွားခြင်း (အထူးသဖြင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နစ်မြှုပ်ခြင်းမရှိဘဲ“ အာကာသ” ၏ခံစားချက်ကိုပိုမိုမြင့်မားစေရန်သင်နှင့်အကြားရှိတံခါးတစ်ခုနှင့်အတူ) ခွာခြင်းပါဝင်သောချစ်မြတ်နိုးရသူအငြင်းပွားမှုများတွင်အနီရောင်သတိပေးအချိန်ကာလများအတွက်စိတ်ကူးတစ်ခုထွက်လာသည်။ ထို့နောက်ရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာသို့ပြန်သွားသည်။
မင်းကိုကြောက်နေတဲ့မင်းရဲ့ယောက်ျားတွေကမင်းရဲ့လိင်တံကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကနေကောင်းကောင်းသတ်ဖြတ်လိုက်ပြီလား။ မစိုးရိမ်နှင့်။ ဒါဟာတကယ်ကိုပြန်လာပါဘူး ဘုရားကောင်းပါပြီ၊ သူကကျွန်တော်ဟာ“ သူ့လိင်တံကိုပိုကြီးလာအောင်လုပ်ခဲ့တာ” လို့ကျိန်ဆိုခဲ့တယ်။ သူပြောတာကိုကြားရတာကကျုပ်ရဲ့လုပ်ရပ်ပဲ။ သူဟာကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးလိင်စိတ်နိုးထစေတယ်။
သူကသူ့ပြန်လည်နာလန်ထူရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားမှာပါ။ sensitivity အကြောင်းပြောရမယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတည်းကငါတို့ဟာမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ မိမိအဘောင်းဘီအတွက်လာ၏။ ဒါဟာတကယ်ကို၏လှပသောနှင့်သူ့ဟာသူ၏ကြင်နာခဲ့သည်။ ဒီပြသမှုက IT ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းပါ။ သူ၏ ဦး နှောက်သည်အချို့သောဆားကစ်များကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီးထိုတွင်ရှိနေသောအာရုံကြောဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကိုလက်ခံရန်လက်ခံနိုင်သောလက်ခံနိုင်သည့်ပမာဏကိုတိုးပွားစေသည်။
ဆိုလိုတာကငါတို့လုပ်နေတာကိုငါတို့သိတယ်၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုခြင်းသည်အလွန်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့လိုတာနဲ့မတူဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကသူ့မှာအပြောင်းအလဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုခိုင်လုံတဲ့ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားပဲ။ ဦး နှောက် နှစ်ပေါင်းများစွာပျက်စီးခြင်းကိုပြောင်းပြန် ဒါဟာသက်သေပြခဲ့သည်။ တွက်ချက်မှု၏ခဏ။ တစ်ခုခုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးနားလည်လိုက်တယ် -“ shit ။ အနာပျောက်ပြီ ဒီမှာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်နေပြီ”
အဲဒီမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစွဲနေသူအားလုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းဟာသူနဲ့အတူပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့သူဖြတ်သန်းသွားတာကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။ တ ၀ က်ထဲ ၀ င်ရန်မကြောက်ပါနဲ့၊ ယခုအချိန်ထက်ကောင်းသောအချိန်မရှိပါ။ သတ္တိရှိပါ။ ဒါဟာသင်ခံစားရမယ့်အဆင်မပြေတဲ့အားနည်းချက်တွေရဲ့ဒုတိယစက္ကန့်တိုင်းကိုအကျိုးရှိပါတယ် beautiful လုံးဝလှပသည်။
နောက်လအနည်းငယ်အကြာမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကြီးစွာသောပစ္စည်းပစ္စယ, လက်တို့ကိုကိုင်ပြီးနမ်း, cuddling, ပျော်စရာရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အပြား၏အလယ်တွင်ပျံ့နှံ့သွားသောကြောင့်စိုက်ထူခြင်းမများလာဘဲများသောအားဖြင့်အားမရှိကြပါ။ တိုတိုပြောရရင်ကျနော်တို့မှာဘယ်တော့မှလိင်မဆက်ဆံဖူးဘူး၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတွေ့ရတော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီမှာတစ်ယောက်ယောက်ရှိအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် IMO reboot ကအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသင်ကိုယ်တိုင်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်တော်ချိန်းတွေ့တာကိုရပ်တန့်လိုက်ကတည်းကအမြန် reboot လုပ်ဖို့ဖိအားမခံစားရဘူး၊ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီးစိတ်သက်သာရာရသွားတယ်။ ကျွန်တော်ဟာတစ်ကိုယ်ရေဘဝကို ၄ နှစ်နီးပါးမရခဲ့ဘူး၊ မကြာခင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့တာနဲ့သိကျွမ်းချင်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ NoFapistry ၏ပထမ ၅ လတွင်ကျွန်ုပ်သည်ပြင်းထန်သောရည်းစား (အလွန်လိင်စိတ်တက်ကြွသောဟက်တာ) ရှိခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်မရဲ့နာလန်ထူမှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေတယ် သူမကကျွန်မတို့ကိုလိင်ကိစ္စရှောင်ရှားဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမအမြဲတမ်းအဝတ်အချည်းစည်းလမ်းလျှောက်နေပြီး၊ ကျွန်တော်နှင့်အတူရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းခွက်တွေသောက်ချင်နေပြီး၊ ကျွန်တော့်ဒစ်ကဒစ်ခ်တစ်ယောက်မဟုတ်ရင်ဘယ်ဟာကကောင်းမှာလဲ။
သူမကကျွန်မကိုလှည့်ပြီးလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစား၊ အားနည်းသွားတယ်၊ ငါစတုရန်းပုံတစ်ပုံမှတဖန်ပြန်စနေသလိုခံစားရတယ်။ ငါထလိုက်တဲ့အခါငါလိင်အကြောင်းအာရုံစိုက်မယ့်အစားလိင်အကြောင်းစဉ်းစားမိတယ်။ ဒါဟာကျော်လွှားရန်အလွန်ခက်ခဲအခြေအနေဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနဲ့ငါဟာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအမျိုးအစားအတွက်၊ ဒီစိန်ခေါ်မှုကအောင်မြင်ဖို့အတွက်ငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% သို့ပြန်သွားလျှင်ကျွန်ုပ်မသိရပါ။ သို့သော်၎င်းသည် ၁၀၀% မဟုတ်လျှင်၎င်းသည် ၉၀% ရာခိုင်နှုန်းရှိသည့်နေရာ၌ရှိသည်။ ယောက်ျားတွေသည်းခံပြီးခွန်အားရှိပါ၊ reboot အလုပ်လုပ်မှာပါ။ သောကြာနေ့သည်ကျွန်ုပ်အတွက် ၈ ပတ်ဖြစ်သည် လူတိုင်းအတွက်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာမသေချာပေမဲ့ငါသေပြီဖြစ်သောကာလတစ်လျှောက်နှင့်အရာအားလုံးကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ ဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာငါလိင်အကြောင်း 100 ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် 100th ရက်သတ္တပတ်အပြီးဖြစ်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်၏စကားလုံးကိုမယူပါနှင့်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အချိန်ကာလတစ်ခုပြီးနောက်လုပ်ငန်းစဉ်နှေးကွေးသွားသည်ကိုမယုံပါ။ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်၏ငပဲသည် ပို၍ ပင်ကောင်းလာသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ နောက်တစ်ခေါက်ပဲငါကတခြားသူတွေအတွက်စကားမပြောနိုင်ဘူး
ငါ PMO မရှိနှင့်အတူ 8 ပတ်လုံးတစ်ခုလုံးသွား၏။ မပြန်ဘူး။ ငါ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောလိင်အင်္ဂါကတော့လိင်ကနေ။ ငါပြောတာလိုပဲငါ ၁၀၀ ရာနှုန်းပြည့်သေးသေးလေးလားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကကြီးတယ် !!!! ငါခက်ခဲခဲ့ပေမယ့်ငါဤမှတဆင့်သွားသောအမှန်တကယ်ဝမ်းသာတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများမှလွတ်မြောက်စေခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်၏လိင်တံနှင့်စိုက်ထူမှုများကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်လာသည်။ ငါကလူတစ်ယောက်လိုပဲငါလိင်တံကိုချစ်တယ်၊ ငါကမှတဆင့်သွားယောက်ျားတွေမျှော်လင့်ချက်အချို့ပေးရန်ဤ post ခဲ့ရသည် !!!